पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा कलेजोसँगै टाँसिएको ट्युमरको सफल शल्यक्रिया « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७७, ७ भाद्र आईतवार १४:१५ मा प्रकाशित
मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका ७ की बबिता माझी विगत ४ महिनादेखि कलेजोसँगै टाँसिएको ट्युमरबाट पीडित थिइन्। उपचारमा संलग्न डा. बासुदेब बाँस्कोटाका अनुसार यस किसिमको शल्यक्रिया नेपालमा पहिलो पटक भएको हो । यसलाई ‘एड्रिनल मास’ भन्ने गरिन्छ। शल्यक्रिया सम्पन्न गर्न ४ घण्टा बढी समय लागेको डा. बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना महामारीको समयमा पनि जटिल प्रकारका रोगको उपचार गर्दै आएको विएण्डसी र पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले जुनसुकै समयमा पनि उपचार दिने अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँले बताउनुभयो । लकडाउनका कारण भारत जाने बिरामी पनि आउने गरेकोले थप बिरामीको सेवामा अस्पताल क्रियाशील रहेको उहाँको भनाइ छ ।